कृषिमा 'सुपर जोन'
सम्पादकीय सम्पादकीय करिब७० प्रतिशत नेपालीको आजीविकाको आधार भए पनि कृषि क्षेत्रले गति पक्रन सकेको छैन। कृषि प्रणाली पुरानै छ, यसलाई हेर्ने मानसिकता पनि पुरातन छ। यसको प्रमुख कारण हो, बजेट पर्याप्त हुँदा पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसक्नु। विस्तृतमा पढ्नुस्
संविधान कार्यान्वयनका स्वार्थ
गुणराज लुइँटेल गुणराज लुइँटेल मुलुकको संवैधानिक तथा न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक महिला प्रधानन्यायाधीशको गौरव प्राप्त हुने अवसर गुमेको छ। समयमै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस र त्यसमा सुनुवाइ भएको भए यतिबेला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्कीलाई संसारभरिबाट बधाईको ओइरो लाग्ने थियो। दुनियाँले एकपटक यो अवसरबाट प्रेरणासमेत लिने थियो। विस्तृतमा पढ्नुस्
राजेन्द्र थापा राजेन्द्र थापा अन्ततः साठीको दशकमा इन्दिरा गान्धीबाट प्रतिपादित डक्ट्रिन नरेन्द्र मोदीकालमा आएर कार्यान्वयन हुने स्थिति छ। यसका प्राप्तिका लागि मधेसी मोर्चामार्फत् उपयोग गरिएका आतंक देशभरका जनताले भोगे। अर्थतन्त्र तहसनहस भयो। विस्तृतमा पढ्नुस्
न्यायपरिसरमा नयाँ अनुहार!
शंकरकुमार श्रेष्ठ शंकरकुमार श्रेष्ठ यस आलेखको प्रारम्भमा नयाँ वर्ष २०७३ले नेपालमा स्वतन्त्र, सक्षम, निस्पक्ष तथा निर्भिक न्यायपालिकाको स्थापना गर्न सकोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्छु। २०७३ साल वैशाख १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको पद बहाली भएको छ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक महिला प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनु… विस्तृतमा पढ्नुस्
शिक्षक हुन ढोका खुला
रमेशप्रसाद गौतम रमेशप्रसाद गौतम हुने खानेका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्न जाने र हुँदाखानेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने वातावरणले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको आकर्षण घट्दै गएको छ। यो नै राष्ट्रको शिक्षामा ठूलो चुनौती हो। शिक्षामा सबैको पहुँच पुगोस् र देशभरका सबै केटाकेटीले निःशुल्क पढ्न पाउन भनेर… विस्तृतमा पढ्नुस्
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा दलित
हिरा विश्वकर्मा हिरा विश्वकर्मा सन् १९४५ मा भएको दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै मानव अधिकारको विषय विश्वव्यापी बन्न थालेको थियो। खासगरी जर्मनका नाजी हिटलरले यहुदी तथा कम्युनिस्टलगायतका दशौं लाख मानिसको नरसंहार गरेपछि यो विश्वव्यापी चासोको विषय बनेको थियो र त्यसैको परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनाका साथै… विस्तृतमा पढ्नुस्
उपस्थिति आधा आकाशको
15 Apr 2016 शुक्रबार ३ बैशाख, २०७३
सम्पादकीय सम्पादकीय मुलुकमा राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश तीनै स्थानमा महिलाको उपस्थितिमाथि टिप्पणी गर्दै कसैले सामाजिक सञ्जालमा लेख्यो– 'बाठा पुरुषले खोलेको सहकारीमा महिलालाई ठुल्ठूला पद दिएजस्तो!' यो अभिव्यक्तिमा पूरै सहमत हुन नसकिए पनि एकपटक सोच्न बाध्य भने अवश्यै भइन्छ। मुलुकका यी महŒवपूर्ण स्थानमा… विस्तृतमा पढ्नुस्
डा.सरोज धिताल डा.सरोज धिताल प्रायः सबैजसो पश्चिमा धर्म सम्प्रदायमा 'सैतान' को उल्लेख हुने गर्छ। मायावी, वाचाल, छलकपटले पूर्ण, मानिसलाई कुकर्म गर्न उक्स्याउने, आकर्षक र शक्तिशाली ईश्वर विरोधी शक्तिका रूपमा यसको चित्रण गरिन्छ। पूर्वीय पुराणहरुमा ठ्याक्कै 'सैतान' सँगै हुबहु मिल्ने चरित्र नभए पनि गीताको १६औं… विस्तृतमा पढ्नुस्
संविधान कार्यान्वयन र बजेट
डा. खिमलाल देवकोटा डा. खिमलाल देवकोटा संविधान निर्माणपश्चात मुलुक दोस्रो संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको छ। यस अवधिमा प्रान्त सीमाङ्कनमा सामान्य परिमार्जन, अधिकार सूचीहरुको कार्यविश्लेषण र तद्अनुरूप कानुन निर्माण, स्थानीय निकायको पुनर्संरचना, प्रान्तीय स्तरमा कर्मचारीको व्यवस्थापन र प्रशासनिक भवन/संरचना निर्माण, संवैधानिक निकायहरुको गठन, संघ, प्रान्त र स्थानीय तहको… विस्तृतमा पढ्नुस्
संकट र स्वाभिमानको वर्ष
रघु पन्त रघु पन्त २०७२ सालले केही तीता र केही खरा पाठ सिकाएर गएको छ। वर्षको सुरुमै भूकम्परूपी प्रकृतिले उत्पन्न गरेको संकटको त्रास वर्ष सकिँदा अझसम्म पनि जारी नै छ। भूकम्पका सानातिना प्रकम्पन अझै जारी छन्। विस्तृतमा पढ्नुस्
StartPrev…NextEndPage 19 of 507	भर्खरै...